Daawada - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
Wixii Kaabsal adag
Kaabayaasha 'gelatin hollow', waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu hayo qaar ka mid ah dawooyinka adag, iyo sidoo kale daawooyinka dareeraha ah, sida wax soo saarka caafimaadka ama dawooyinka, si loo wanaajiyo dhibaatada cunida iyo dhadhanka xun marka la qaadanayo, wax saameyn ahna kuma laha jirka. Waa walax aad u ammaan badan. Isticmaalka kaabsalka ku dhaca gelatin hollow waa in badanaa laga sameeyo laba kaabsol, oo mid ka mid ah badiyaa laga buuxiyo daroogo, sida daroogooyinka adag ama kuwa budada ah, ka dibna qolofka kale ayaa la dhigayaa dhinaca kale ee daroogada, iyo daawooyinka lagu buuxiyo kaabsoolka ku jira gelatin gebi ahaanba si toos ah ayaa loogu qaadi karaa geedi socodka xiga.
Waayo, kaabsal jilicsan
Kaabsal jilicsan waa nooc ka mid ah habka baakadaha ee kaabsoolka, kaas oo badanaa loo isticmaalo dawada ama cuntada caafimaadka. Waa nooc kaabsol ah oo lagu sameeyo iyadoo lagu shaabadeeyo dawo dareere ah ama dawo adag oo dareere ah oo ku jirta maadada kaabsoolka jilicsan. Waxyaabaha jilicsan ee kaabsoolka ah waxaa laga sameeyaa gelatin, glycerin ama daawooyinka kale ee daawooyinka ku habboon.
Kiniiniga ama Daawooyinka Vitamin
Dahaarka gelatin wuxuu fiitamiinnada ka ilaaliyaa iftiinka ama oksijiinta. Oo sidii stabilizer oo kiniin